Maxaa laga qabanayaa Maldives, yaab badweynta Hindiya | Safarka Absolut
Waxyaabaha lagu sameeyo Maldives
Dalxiis ee Maldives
Maxaa laga sameeyaa Maldives? Su'aashan waxaa waydiiyey dhamaan taageerayaasha safarada qalaad. Iyo meeshan loo socdo oo ku taal Badweynta Hindiya, koonfurta Hindiya iyo koonfur-galbeed ee Sri Lanka, waa hubaal waana wax badan.
Si rasmi ah Jamhuuriyadda Maldives wuxuu ka kooban yahay qayb ka mid ah lix iyo labaatan atol. Taa baddalkeeda, mid kasta oo ka mid ah kuwan wuxuu ka kooban yahay dhowr jasiiradood oo isla qayb ka ah Dhuxul dhagax ah. Markaa dabeecad ayaa ah cajaa'ibyadan dabiiciga ah ee waddanka in ereyga atoll laftiisu ka yimaado afka dhiveni, ayaa looga hadlaa Maldives. Sidaa darteed, dabeecad xamaasad leh, xeebo paradisiacal, dhaqan ka duwan iyo jawi diiran sanadka oo dhan ayaa ah waxyaabaha laga arko Maldives. Haddii aad rabto inaad ogaato meeshan ku taal Badweynta Hindiya, waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad nagu soo biirto.
1 Maxaa lagu arkaa laguna sameeyaa Maldives? Hawlaha dhadhanka oo dhan
1.1 Quusitaanka quusitaanka
1.2 Raadi xeebta aad ugu jeceshahay
1.3 Ku raaxayso qorrax ka soo bax, qorrax dhaca iyo bioluminescence
1.4 Baro jasiiradaha ku yaal badda dhexdeeda
1.5 Ku raaxayso safarro xiiso leh
1.6 Baro Malé, caasimadda
2 Waxa laga cuno Maldives
3 Waa maxay waqtiga ugu fiican ee loo safro Maldives
4 Sida loo tago Maldives
5 Tilmaamo kale oo ku saabsan safarka Maldives
Maxaa lagu arkaa laguna sameeyaa Maldives? Hawlaha dhadhanka oo dhan
Maldives-ka waxaad ku raaxeysan kartaa booqashooyinka taallooyin aad uga duwan kuwa reer Galbeedka iskuna day inaad sameysid gastronomy si baaxad leh uga soo horjeedda wixii aan ku haysano Yurub. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo laga sameeyo Maldives.
Waxa ugu horreeya ee aad rabto inaad ogaato ayaa ah in Maldives ay tahay mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya adduunka ee loogu talagalay taageerayaasha howlaha biyaha hoostooda. Waa wax cajiib ah Dhuxul dhagax ah iyo dhirta iyo dhirta badan ee biyaheeda buluuga ah ee buluugga ah ayaa kumanaan nooc oo kala duwan ah ku soo qulqula waddanka sannad kasta.
Maaha wax aan micno lahayn, waa waayo-aragnimo la yaab leh in laga gudbo moolka badda ee ku xigta gunta nibiriyada badda nibiriga ah, oo gaari kara shan iyo toban mitir oo dherer ah; kan aan ka yarayn ee weyn stingrays; ah hawksbill qoolley ama shark caarada madow, dhammaantood aan waxyeello u lahayn aadanaha.
Iyo tan ugu fiican, uma baahnid inaad noqotid xirfadle khibrad u leh quusitaanka. Waxaa jira safarro abaabulan oo leh khubaro kala duwan. Sidoo kale, uma baahnid inaad si qoto dheer u quusato si aad u aragto xayawaankan kugu xiga.
Raadi xeebta aad ugu jeceshahay
Waxyaabaha kale ee yaabka leh ee Maldives waa xeebteeda ciidda cajiibka ah ee aan dhamaadka lahayn iyo biyaha buluugga ah ee loo yaqaan 'turquoise blue'. Qaar ka mid ah ayaa ah Xeebta Bikini, Jasiiradda Rasdhoo; Himmafushi, oo ku habboon kuwa badda lagu tuuro; Macaafushi, halkaasoo aad ka heli doontid xasillooni laga xasiiqi karo; Guulhi, meesha aad kula xiriiri karto dadka deegaanka, iyo Reethi, oo leh guryo jilicsan oo dul sabeynaya. Labadaba xeebahan iyo kuwa kale oo badan, waxaad ku tababaran kartaa dhammaan howlaha biyaha ee aan soo sheegnay.
Ku raaxayso qorrax ka soo bax, qorrax dhaca iyo bioluminescence
Mid ka mid ah astaamaha lagu garto Maldives waa muuqaalkeeda cajiibka ah ee xeebta iyo berriga. Sidaa darteed, qorax soo baxa iyo qorax dhaca aagga waa kuwo aan caadi ahayn oo aad u jecel. Laakiin sidoo kale dabeecaddeeda ayaa ku siinaysa wax kale oo aad ku samayso Maldives: u fiirso ifafaalaha xiisaha leh ee bioluminescence.
Habeenkii mararka qaarkood biyaha bada wey dhalaalaan. Waxaa u sabab ah phytoplankton-ka gaarka ah ee qaybtaan ka mid ah Badweynta Hindiya, taas oo, markay baddu kacsan tahay, soo saarta iftiin xoog leh. Caqli ahaan, waa dhacdo aad kaliya arki karto habeenkii, laakiin runtii waa wax layaableh, gaar ahaan xeebaha Jasiiradda Vaadhoo.
Baro jasiiradaha ku yaal badda dhexdeeda
Mid ka mid ah habka ugu weyn ee gaadiidka u kala goosha jasiiradaha waa badda dhexdeeda. Laakiin, hadaad mid kireysato, waxaad u adeegsan kartaa ujeedo kale: waa habka ugu fiican ee lagu ogaan karo layaabka atoliyadaha.
Sidaan kuu sheegnay, dalku wuxuu ka kooban yahay lix iyo labaatan dhisme. Habka ugu fiican ee lagu arki karaaana waa hawada. Aragtidan iyo biyaha hufan ee aagga, waxaad awoodi doontaa inaad u kuurgasho xeebta dhuxusha ee hoostiisa ku taal ee bixisa isku xirnaanta jasiirado kala duwan isla markaana, si kadis ah, u qaado sawirro cajiib ah.
Ku raaxayso safarro xiiso leh
Maldives waxay diiradda saaraysaa dalxiiska sidaa darteed waxay siisaa dalxiisyo kala duwan booqdaha. Qaarkood sidoo kale aad ayey u xiiseeyaan, waxaan dhihi karnaa waa kuwo adduunka ku gaar ah, laakiin waxaan soo bandhigi doonaa laba.
Kan hore wuxuu ka kooban yahay kireysto dhoni, taas oo ah doonta caadiga ah ee dalka isla markaana la socota shaqaalaheeda shaqooyinkooda kalluumeysi ee soo jireenka ah. Laakiin xitaa xiisaha badan ayaa ah tan labaad. Laga yaabaa in aad u safraan jasiirad lamadegaan ah oo xitaa ku dhex hoydo. Qiyaas sida ay u egtahay inaad dareento sida castaway oo dhowr saacadood ah.
Jasiiradda aan la degganeyn ee Maldives
Si kastaba ha noqotee, haddii aad dooratid inaad ku hoyan karto xeebteeda mid ka mid ah, taxaddar maxaa yeelay mawjadda ayaa sare u kacaysa waxaadna arki kartaa inaad dhex sabbaynayso badda dhexdeeda. Waxaa jira safaro abaabulan oo kuu qaada labadiinaba jasiiradaha noocan ah iyo kuwa kale ee la degan yahay halkaasoo aad ka ogaan kartaan caadooyinka awooweyaasha dadka deggan.
Baro Malé, caasimadda
Malé waa magaalada ugu weyn ee jamhuuriyada Maldives iyo caasimada dalka. Waxay ku taal jasiiradda isla magaca ah taas oo iyaduna markeeda ku jirta kaafu atoll. Waxaa loo qaybiyaa toddobo aag, oo saddex ka mid ahi ay ku yaalliin jasiirado yaryar oo aad u dhow. Kuwani waa aagagga Vilimalé, Hulhumalé iyo Hulhule.
Caasimaddu way yar tahay, waxaana ku nool qiyaastii XNUMX, laakiin waxay leedahay soo jiidasho badan. Iskusoo wada duuboo, waa magaalo mashquul badan oo ka duwan xasilloonida meelaha kale ee Maldives.
Maskaxda ku hay in ay tahay dad aad u fara badan oo u jira qiyaastii laba kiiloomitir oo isku wareeg ah oo magaaladu leedahay. Sababtaas awgeed, inta badan jidadkeeda waa cidhiidhi oo waxaa ka buuxa deegaan. Tusaale kan dambe ayaa ah suuqa kaluunka, taas oo ay ka buuxaan dad maalintii oo dhan.
Waxaad sidoo kale booqan kartaa kooda masaajidada (Maldives waa Muslim). Kuwaas waxaa ka mid ah, kuwa Suldaan Maxamed Thakurufaanu iyo Hukuru Miskiiy. Kan dambe, kan ugu weyn dalka, wuxuu ku yaalaa banaanka magaalada, wuxuu kudhowyahay bartamaha jasiiradda waana mid cajiib ah, maadaama lagu dhisay dhagaxa meeraha badhtamihii qarnigii XNUMXaad.
Soojiidashada kale ee Malé waa kuwa xiisa badan Rasrani Bageechaa park, Matxafka Qaranka, Qasriga Dadka iyo Memorial loogu talagalay dhibanayaasha tsunami 2004. Ma iloobi karo, dabcan, dukaamada xusuusta badan ee aagga dekedda.
Marka la soo koobo, booqashada Malé waa ka soo horjeedka ugu wanaagsan ee nasashada iyo xasilloonida aagagga kale ee dalka.
Waxa laga cuno Maldives
Ka dib markaan sharraxno waxa lagu arko Maldives, aan wax yar ka hadalno caloosha, taas oo sidoo kale qayb ka ah booqasho kasta oo dalxiis. Cunnooyinka dalkan waxaa si xoog leh saameyn ugu leh kuwa deriska la ah Hindiya iyo Srilanka. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale leedahay saameyn Beershi, Afrikaan iyo Carab ah.
Waxyaabaha aasaasiga u ah gastronomy-keeda ayaa ah kalluunka, bariis y qumbaha. Caddaynta wanaagsan ee tani waa mid ka mid ah suxuunta ugu caansan (aad u badan oo xitaa loo cuno quraac), the mashuni salad, oo leh kaliya qumbaha, liinta, basasha, chili iyo tuna. Kani waa markiisa, kalluunka dhexdiisa, midka aad had iyo jeer ka heli doonto cunnada Maldivianka.
Ku gulxa, saxan ku saleysan kubadaha hilibka kaluunka la shiilay. Dhiniciisa, garudhi Waa nooc maraq ah oo lagu sameeyo bariis, basbaas, liin iyo dabcan tuna. Iyadoo tan, pate loo yaqaan rihaakuru taasna waxaa lagu siiyaa rootiga deegaanka, oo aan laga sameyn khamiir kuna saleysan bariis.
Dhinaca kale, Kulhi borkinaa waa nooc ka mid ah canjeelada kalluunka iyo masrixa Waa curry isku mid ah (kiiskan, tuna cusub oo loo jarjaray xabadaha). Khudaarta cagaaran ayaa sidoo kale loo diyaariyaa iyada oo lagu saleynayo ukunta, bocorka, moringa iyo xitaa muuska cagaaran. Dhammaantood waxaa lagu siiyaa bariis. Si aad u dhammeysato saxamada kalluunka, waxaan kuu sheegi doonaa waxa ku saabsan theluli kavaboo, kuwaas oo ah croquettes macaan oo leh taabasho basbaas wanaagsan.
Sida khudradda, aad bay u badan yihiin baradhada macaan, ka cassava iyo Taro, inta ay yihiin miraha aad u cunay frutipan iyo pandanos Badanaa waa la cunaa iyadoo la kariyey, inkasta oo kan dambe sidoo kale la cuno isagoo ceedhin.
Laakiin heerka macmacaanka ee heer sare ah ee Maldives ayaa ah foni boakiba, nooc bariis macaan oo qumbaha loo kariyey sida keega oo mararka qaar lagu daro yicib.
Si aad u cabto, ma dalban kartid aalkolo, maadaama ay mamnuuc tahay garoonka diyaaradaha iyo hudheelada mooyee. Dhinaca kale, ka caano qumbaha, shaah iyo dhammaan casiirka, gaar ahaan kan ra, oo laga sameeyay timir.
Waa maxay waqtiga ugu fiican ee loo safro Maldives
Waxaan horeyba kuugu sheegnay waxa lagu arko Maldives iyo waliba waa maxay cuntooyinka caadiga ah ee dalka. Laakiin sidoo kale waxaad xiiseyn doontaa inaad ogaato sida ay hawadeedu tahay inaad go'aansato goorta ay kugu habboon tahay safarkaaga.
Cimilada Maldives waa nooc tropical, inkasta oo uu dhexdhexaad ka ahaa joogitaanka Badweynta Hindiya. Tani waxay ka muuqataa maqnaanshaha idaacadaha. Ama, si fiican loo dhigo, gudaha xagaa joogto ah: Heerkulka marar dhif ah ayaa ka hooseeya shan iyo labaatan iyo shan digrii Celsius.
Dhinaca kale, laba xilli ayaa lagu kala duwanaan karaa iyadoo ku xiran hadba sida Monsoon. Inta u dhexeysa Nofeembar iyo Maarso waxay ka timaaddaa waqooyi-bari tanina waxay u tarjumaysaa roob yar iyo heerkul qabow oo xoogaa ah. Si kastaba ha noqotee, laga bilaabo Abriil ilaa Oktoobar waxay ka soo dhacdaa koonfur-galbeed, taasoo horseedda roob badan iyo kuleyl badan. Intaas waxaa sii dheer, xilligan ugu dambeeya dabeylaha ayaa ka sii xoog badan.
Sidaa darteed, waqtiga ugu wanaagsan ee aad booqan karto Maldives waa kan ugu horreeya, inta u dhexeysa Nofeembar iyo Maarso. Gaar ahaan bishan aan ku jirno. Cimilada ayaa ah mid aad u wanaagsan, biyaha bada waxay leeyihiin daahfurnaanteeda ugu sareysa waxaana sii dheer, ma jiraan dalxiisayaal badan sida xagaaga.
Sida loo tago Maldives
Sida ugu wanaagsan ee aad ku imaan karto dalka waa diyaarad. Labku wuxuu leeyahay a Madaarka caalamiga. Si kastaba ha noqotee, laga bilaabo Spain ma jiraan duulimaadyo toos ah. Sidaa darteed, waa inaad doorataa inaad u safarto London ama Paris si ay ugu duulaan caasimada Maldives.
Waxaad sidoo kale ku safri kartaa badda. Laakiin sida kaliya ee lagu sameyn karaa waa shirkad safarrada, maadaama aysan jirin doomo safraya. Markaad joogtid waddanka, waxaad leedahay dhowr siyaabood oo aad uga wareegi karto.
Caasimadda waxaa ka jira adeeg ah taksiyada kuwaas oo qiimahoodu ay nidaamineyso dowladda. Si kastaba ha noqotee, hoteelo badan ayaa ku siiya adiga dhonis, doonyo dhaqameed aan horay kaaga soo sheegnay. In yar oo ka fog, waxaad leedahay doomo dheereeya iyo waliba, gaar ahaan inaad u safarto jasiirado kale, waxaa jira maraakiibta badda.
Labadan hab ee ugu dambeeya ee gaadiidku raqiis kuma wada jiraan. Tusaale ahaan, duulimaadka badda wuxuu kugu kici karaa inta u dhexeysa laba boqol ilaa afar boqol iyo konton euro. Laakiin safarku wuu u qalmaa maxaa yeelay wuxuu ku siinayaa wax cajiib ah aragtiyada atoliyadaha.
Tilmaamo kale oo ku saabsan safarka Maldives
Marka lagu daro ogaanshaha waxa laga sameeyo Maldives iyo sidoo kale ogaanshaha cimilada iyo caloosha, waxaa muhiim ah inaad tixgeliso qaar ka mid ah talooyinka intaadan safrin.
Si aad u gasho wadanka aadan u baahnayn fiiso gaar ah ma lahan. Dukumeentigaan, soddon maalmood, ayaa laguu soo saari doonaa markii aad timaado waana bilaash. Si kastaba ha noqotee, way ku weydiin doonaan baasaboor, taasoo ay tahay inay ansax noqoto ugu yaraan lix bilood. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku weydiin doonaan adiga tigidhka soo celinta. Haddii aad rabto inaad fiiso u kordhiso soddon maalmood oo kale, waa inaad bixisaa qiyaastii afartan euro. Midkoodna looma baahna tallaallada, ugu yaraan caadi ahaan. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaan kugula talineynaa inaad la tashato bogga Wasaaradda Caafimaadka safarka ka hor.
Dhinaca kale, dhaqanka Maldives waa muslim dhaqameed, sidaa darteed dabeecadaha iyo lebbiska qaarkood si fiican looma tixgeliyo. Tani waxay khuseysaa waddooyinka, maahan hoteelada, ee ku habboon caadooyinka reer galbeedka. Ugu dambeyntiina, lacagta dalku waa Rufiyaa Maldives. Waxaad si dhib leh uga heli doontaa Isbaanish. Laakiin hudheelada laftooda waxaad ku leedahay adeeg sarrifka lacagaha ah. Sidoo kale waad ku sameyn kartaa garoonka diyaaradaha, laakiin kuguma talineyno sababtoo ah waxaad waayi kartaa lacag.
Gabagabadii, haddii aad ka fekeraysay waxa laga samaynayo Maldives, waxaad horeyba u haysay macluumaad ku saabsan safarkaaga. Ha iloobin inay tahay meel cajaa'ib leh, oo leh qawaaniin qurux badan, qorrax-dhacyo iyo qorrax-soo-baxyo cajaa'ib leh, taallo xusuus ah iyo, wixii ka sarreeya, dhaqan iyo gaasriimo ka duwan kuweenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Waxyaabaha lagu sameeyo Maldives
Maraakiibta badda Mediterranean-ka